Ciidamo soomali ah oo wata tuutaa imaaraadka carabta oo lagu arkay gobolka marib ee dalka yemen. – Xeernews24
Ciidamo soomali ah oo wata tuutaa imaaraadka carabta oo lagu arkay gobolka marib ee dalka yemen.
Waxaa markii ugu horeysay Gobolka Marib ee dalka Yemen lagu arkay ciidan Soomaali ah, oo la socda Ciidanka Militariga Emirate-ka Carabta, sida ay qortay Warbaahinta Yemen.
Warbaahintu waxay tebisay askartan inay xidhan yihiin dareyska Ciidanka Emirate-ka Carabta, isla-markaana ay yihiin kuwo lagu soo tababaray dalkaasi.
Soomaalida degan Magaalada Sanca oo xaalad go’doomin ah wajahaaya, ayaa walaac xoogan ka muujiyay amuurtaasi, waxaana la ogyahay Xoogaga Xuuthiyiinta inay Maamulan Magaaladaasi.
Dahabo Cabdi Faarax, Madaxa Guddiga Qaxootiga Sanca oo ku sugan Magaalada Sanca, ayaa waxay sheegtay arrintan inay cabsi badan ku keentay Soomaalida, xilli ay sheegtay in Soomaalidu ku go’doonsan tahay Magaaladaasi.
Mar ay ka hadleysay Ciidanka Soomaalida ah ee la socda Militariga Emirate-ka, ayaa waxay sheegtay inay yihiin kuwo ku soo tababartay Emirate-ka.
Wadamadda Khaleej-ka, ayaa wada qorshe ay ciidan xoogan oo dhinaca dhulka ah ugu dirayan dalka Yemen, si loo wiiqo awoodda Xuuthiyiinta, ka dib markii ay diideen inay tallada dalka ku soo celiyan Dowladda uu Madaxweynaha ka yahay Abd Rabbuh Mansur Hadi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/07/imarate.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-07-23 10:27:192017-07-23 10:27:19Ciidamo soomali ah oo wata tuutaa imaaraadka carabta oo lagu arkay gobolka marib ee dalka yemen.
Daawo: 5 arrin oo aan ka baranay dadaalkii DF iyo maxaabiistii ay Ethiopia soo... Dowladda Ingiriiska oo dhabarka ka jabisay damacii Somaliland ee qaddiyaddii...